Mmụta Mmụta, Site Ọnụ Ọgụgụ »Mahadum Hodges
Mmezu Mmụta na Nhazi Ọrụ Ọrụ
Ọganiihu ụmụ akwụkwọ na-emezu ebumnuche nke onwe ma ọ bụ nke ọkachamara bụ ebumnuche kachasị mkpa nke Mahadum Hodges. The mahadum na-atụle mmezu nke ụmụ akwụkwọ na arụmọrụ nke ụlọ ọrụ n'ọtụtụ ụzọ, gụnyere ọrụ ụmụ akwụkwọ / ọrụ ntinye ego, nrụpụta ọrụ ogo, njigide nke ụmụ akwụkwọ na nnọgidesi ike, ọnụ ọgụgụ ngụsị akwụkwọ, na ọkwa ụgwọ ụmụ akwụkwọ.
Kwa Afọ Ndabere Mmụta
A kọwapụtara ọnụego njigide kwa afọ dị ka pasent nke ụmụ akwụkwọ na-achọ ogo mmụta debanyere aha na oge ọdịda ndị ka debanyere aha na ọdịda ọdịda na-esote. A na-agbakọ ọnụego njigide afọ maka oge mbụ na Hodges na ụmụ akwụkwọ niile debanyere aha. A na-enye ọnụego njide maka ụmụ akwụkwọ bachelor n'okpuru. Ebumnuche nke Mahadum Hodges setịpụrụ dịgasị iche na-adabere na ngalaba ahụ, yana 40% maka oge mbụ na Hodges yana 60% maka ụmụ akwụkwọ niile debanyere aha.
Oge mbu na Hodges
Studentsmụ akwụkwọ niile debara aha ha
Ọnụọgụ allnọgidesi Ike na Oge Ike na Nweta Mmụta
Studentsmụ akwụkwọ na-ekwuputakarị na oge izizi ha na kọleji bụ nke kacha sie ike, ọkachasị maka ndị na-alaghachi ụlọ akwụkwọ mgbe ha nọrọ ogologo oge, ndị na-arụ ọrụ oge niile, na ndị na-akwado ezinụlọ. Mahadum Hodges na-agakwuru ụmụ akwụkwọ nwere ọrụ enyere iji nyere ha aka ịga nke ọma - ọkachasị n'oge oge mbụ ahụ dị oke egwu.
A na-akọwa Ọnụego Nkwenye Okwu dị ka pasent nke ụmụ akwụkwọ na-achọ ogo mmụta debanyere aha na ọdịda ọdịda ndị ka debanyere aha na oge oyi a. A na-agbakọ ọnụego ịnọgidesi ike maka oge mbụ na Hodges na ụmụ akwụkwọ niile debanyere aha.
N'okpuru ebe a bụ ọnụego ịnọgidesi ike maka ụmụ akwụkwọ na-achọ ogo mmụta; ezi freshmen (oge mbu na mahadum); na ụmụ akwụkwọ ndị agha, na ndị otu ọ bụla na-eru ma ọ bụ karịa karịa 50% nke Hodges University maka oge mbụ na Hodges na 70% lekwasịrị anya maka ụmụ akwụkwọ niile debanyere aha. Ihe omuma a gosiputara na otutu umu akwukwo nwere ihe ịga nke oma na akwukwo mbu ha ma debanye aha na Mahadum Hodges maka okwu nke abuo ha na mahadum.
MGBE MB AT N'HLỌ AK COKỌ
Studentsmụ akwụkwọ na-achọ ogo 70% 71% 75% 70% 67% 71% 58% 60% 74%
Ezi ndi ohuru 71% 74% 77% 61% 66% 72% 53% 51% 70%
Nile Hmụ akwụkwọ etinyere COHORT
Studentsmụ akwụkwọ na-achọ ogo 75% 77% 76% 78% 75% 76% 76% 65% * 76%
Studentsmụ akwụkwọ ndị agha 73% 78% 72% 83% 78% 79% 84% 72% * 84%
* MARA: Ọgbaaghara a oge emechiri ụlọ akwụkwọ emechiri ụlọ akwụkwọ maka ọrịa SARS-COV-2.
Ọnụọgụ ọrụ Job
A na-eji ọnụ ọgụgụ dị na mpụga iji gosipụta ọnụ ọgụgụ ọrụ dị n'ime. Isi data ejiri bu Florida Education and Training Placement Information Program (FETPIP), nke nakọtara data na ulo akwukwo ndi ulo akwukwo Independent Universities & Florida (ICUF). N'ime akwụkwọ a na-ebipụta na nso nso a, Mahadum Hodges dị elu nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere ndị ọgbọ ICUF ya, ya na ụmụ akwụkwọ Hodges na-agbago elu ise kacha elu maka ego a na-enweta kwa afọ maka ndị gụsịrị akwụkwọ na baccalaureate were n'ọrụ n'etiti 2011 na 2019. Ebumnuche Mahadum Hodges maka ụmụ akwụkwọ nke FETPIP kwuru enwetara akara ugo mmụta bachelor na ndị ọrụ bụ 65%.
Ọnụ ọgụgụ nke BACHELOR GRADUATES
Ọnụ ọgụgụ n'ọrụ
Pasent nke BACHELOR GRADUATES EMERE
MGBE A NA-EGO NA-EGO NA-AKA NA-AKA NA-AKA
HU RR AM N’IME ICUF
Arụpụta ogo na Mmụta Mmụta
N'ihi ihe isi ike dị iche iche na ngụsị akwụkwọ ngụsị akwụkwọ na ụlọ ọrụ dịgasị iche iche, otu ezigbo nzaghachi na-akwụ ụgwọ iji gosipụta mmezu nke ụmụ akwụkwọ bụ ogo mmụta. Nrụpụta ogo bụ ngosipụta nke ọnụ ọgụgụ ogo niile enyere na afọ agụmakwụkwọ dịka pasent nke ndebanye aha oge niile (FTE) dị ka akọwara na Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS). Yabụ, imepụta ihe nrịba ama bụ ngosipụta nke mmezu nke ụmụ akwụkwọ n'ozuzu ya, kama ịbụ maka obere akụkụ nke ụmụ akwụkwọ mahadum, ma na-enye ogo dị mma maka mmeta n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Agbanyeghi na Hodges enwetala onu ogugu ndi edenyere aha na nso nso a, okpokoro a gosiputara oganihu na nhaputa ihe di elu, ya na ogo 29 nke enyere 100 FTE na 2019-2020, kariri ugbua ihe di 25 na 100 FTE.
Ogo ngụsị akwụkwọ
A na-ebipụta ọkwa ngụsị akwụkwọ site na Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS) maka gọọmentị etiti. Ọnụ ọgụgụ ndị a na-anọchi anya pasent nke oge, ụmụ akwụkwọ na-achọ ogo mmụta gụsịrị akwụkwọ maka oge izizi ha na kọleji (ezigbo ụmụ akwụkwọ ọhụrụ) ndị gụsịrị akwụkwọ na 150% nke oge a tụrụ anya iji mezue ogo ha.
Otu ndị agha ejiri gbakọọ ọnụ ọgụgụ ngụsị akwụkwọ nke IPEDS anaghị anọchite anya ụmụ akwụkwọ Hodges nke ọma, ndị bụ isi bụ ndị okenye na-arụ ọrụ ma na-akwado ezinụlọ; ya mere, ha na-agakarị nwa oge ma nwekwaa kredit ụfọdụ. N'oge mgbụsị akwụkwọ 2020, nkezi afọ nke ụmụ akwụkwọ Hodges bụ 33 na 34% nke ụmụ akwụkwọ na-achọ ogo mmụta gara obere oge.
Ya mere, iji nye data dị mkpa, Hodges na-agbakọ ọnụ ọgụgụ ngụsị akwụkwọ n'ime ụlọ na pasent 150 nke oge ngụsị akwụkwọ a na-ahụkarị maka ụmụ akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ na ndị otu aha ha na-adaba na Hodges na nke mbụ ya. Ọnụ ọgụgụ ngụsị akwụkwọ na 150 pasent maka oge mbụ na Hodges undergraduate, ụmụ akwụkwọ na-achọ ogo mmụta dị n'okpuru. (Nke a na-anọchite anya ezigbo ndị ọhụụ na ndị na-enyefe-na cohorts.) Tụkwasị na nke a, a na-egosi ọnụ ọgụgụ ngụsị akwụkwọ na pasent 150 maka naanị ndị na-ebugharị, nke na-anọchite anya 70% nke oge mbụ anyị na Hodges cohort. N'aka nke ọzọ, a na-enye ọnụọgụ ngụsị akwụkwọ nke IPEDS n'ozuzu ya iji gosipụta oge niile, ezi ndị otu ọhụụ ọhụụ ka akọwara n'ihu ọha.
Dabere na usoro data sitere na ọdịda 2007 wee daa 2014, ebumnuche Mahadum Hodges maka ntinye ngụsị akwụkwọ n'ime pasent 150 nke oge nkịtị ka emechara bụ 30%.
Akwukwo ndi guru akwukwo na 150%
Umu akwukwo nke na acho akwukwo Fall 2007 Fall 2008 Fall 2009 Fall 2010 Fall 2011 Fall 2012 Fall 2013 Fall 2014
Oge mbu na Hodges Cohort 40% 44% 30% 30% 30% 31% 27% 33%
Nyefee na Cohort 51% 54% 36% 35% 35% 38% 33% 42%
EGO EGO IPEDS NA AT% 150%
N'ozuzu, gụsịrị akwụkwọ na IPEDS 30% 29% 30% 25% 27% 22% 26% 28%
Ihe Nlereanya IPEDS na Mmezu Mmụta
Iji nọchite anya Mahadum Hodges nke ọma, ahọpụtara ọhụụ ọhụụ IPEDS ka ọ bụrụ akara ngosi ngwụcha SACSCOC anyị. Agbanyeghị na agbakọtara usoro a naanị afọ ole na ole (ya na nke kacha nso na 2020-2021 maka otu ndị agha 2012), usoro nyocha usoro ihe omume na-egosi na, na ntinye nke ụmụ akwụkwọ na-agafe na nke oge, nke ziri ezi karịa weghaara ndị okenye na-arụ ọrụ na-alaghachi ụlọ akwụkwọ, ngụkọta afọ 8 niile dabara na ebumnuche anyị 30%.
IPEDS NA-AH ME AKW (KWỌ ((BỌD AW 8BỌCH XNUMX XNUMX)
Umu akwukwo nke na acho akwukwo Mkpokọta 2007 Mkpokọta 2008 Mkpokọta 2009 Mkpokọta 2010 Mkpokọta 2011 Mkpokọta 2012
Oge zuru ezu, Mbido mbụ abanye 30% 29% 29% 23% 26% 26%
Oge-oge, Oge mbu abanye 35% 22% 24% 34% 35% 27%
Oge zuru ezu, Oge izizi abanye 56% 59% 44% 42% 42% 38%
Nkebi oge, Oge izizi abanye 44% 35% 29% 31% 24% 32%
Nsonaazụ Mgbapụta Mkpokọta 45.9% 45.6% 35.6% 32.5% 31.8% 30.8%